विश्व कपको नकआउट चरण पुरा , प्रिक्वार्टरफाइनल भोलीबाट
June 29, 2018 Lightadmin0
मस्को (एजेन्सी) – रसियामा जारी फिफा विश्वकपमा समूह चरणका खेल समाप्त भइसकेका छन् । ४८ खेल सकिँदा सहभागी ३२ टोली मध्ये आधा टोली घर फर्केका छन् । साविक विजेता तथा ४ पटकको विश्वकप जितेको जर्मनी समूह चरणबाटै बाहिरिनु यस पटक विश्वकपको सबैभन्दा अप्रत्यासित नतिजा रह्यो । मेक्सिको, स्वीडेन, दक्षिण कोरिया रहेको समूहमा जर्मनी दुई खेल […]
डिफेन्डिङ च्याम्पियन जर्मनी विश्वकपको समूह चरणबाटै बाहिरियो
June 28, 2018 Lightadmin0
डिफेन्डिङ च्याम्पियन जर्मनी विश्वकप फुटबल २०१८को समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ । समूह चरणको अन्तिम खेलमा दक्षिण कोरियासँग २–० ले स्तब्ध भएपछि चार पटकको विश्वविजेता जर्मनी ८० वर्षपछि विश्वकपको समूह चरणबाटै बाहिरिएको हो । जर्मनी आफू सहभागी भएको विश्वकपको समूह चरणबाटै बाहिरिएको यो पहिलो पटक हो । जर्मनी सन् १९३८ पछि पहिलो पटक समूह चरणबाटै बाहिरिएको […]
मेस्सीको प्रेरणाले अर्जेन्टिना दोस्रो चरणमा
June 27, 2018 Lightadmin0
रुस विश्वकपमा नाइजेरियालाई २–१ गोल अन्तरले हराउँदै अर्जेन्टिना प्रतियोगिताको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ । उक्त हारसँग “सुपर इग्लस” पनि भनिने नाइजेरिया विश्वकपबाट बाहिरिएको छ । अन्तिम समयमा मार्कोस रोजोले गोल गर्दै नाटकीय रुपमा आर्जेन्टिनालाई जित दिलाए र शीर्ष १६ मा आफ्नो टोलीको स्थान सुनिश्चित गरे । म्यान्चेस्टर युनाइटेडका रक्षापङ्क्तिका खेलाडी रोजोले गाब्रिएल मर्सेडोले दिएको […]
नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा पहिरोबाट के अब मुक्ति मिल्नेछ
१३ असार, काठमाडौं । अहिले वर्षातको समय नेपालका विभिन्न ठाउँहरुमा बाढी पहिरो गइरहेको छ । अनलाइन तथा पत्रपत्रिकाहरुमा हिजोआज नछुटाइकन आउने केही खबरमध्ये देशकै लाइफलाइन मानिने नारायणगढ–मुग्लिन सडक अवरुद्धको खबर पनि एक हो । सडक विस्तारका कारण लामो समयसम्म सास्ती पाएका यात्रुहरु काम सम्पन्न भएपछि सहज यात्रा गर्न पाइने विश्वासमा थिए । तर वर्षा हुन […]
विश्वकप – पोर्चुगल, स्पेन दोस्रो चरणमा
June 26, 2018 Lightadmin0
पोर्चुगल र स्पेन रुसमा जारी विश्वकप फुटबलको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छन् । सोमवार राति दुवै देशले खेलेका खेल बराबरीमा सकेका थिए । इरानसँग पोर्चुगलको १–१ गोलको बराबरीमा र मोरक्कोसँग स्पेनको खेल २–२ गोलको बराबरी भयो । पेनाल्टीबाट गोल हानेको इरानले क्रिष्टियानो रोनाल्डोको पोर्चुगलविरुद्धको खेल बराबरीमा टुङ्गाएको हो । रोनाल्डोले आफ्नो टोलीका लागि पेनाल्टीबाट गोल […]
विश्व कपमा आज ४ खेल, पार्चुगल र इरान तथा स्पेन र मोरक्को आज भिड्दै को अघि बढ्लान ?
June 25, 2018 Lightadmin0
मस्को (एजेन्सी)– रसियामा जारी विश्व कपमा समूह चरणका अन्तिम खेलहरु आजबाट सुरु हुँदैछन् । एकै दिन चार खेल हुँदैछन्, जसमा समूह ‘ए’ र ‘बी’का समान २ खेल छन् । समूह ‘ए’मा यसअघि नै प्रिक्वार्टरफाइनलमा स्थान बनाइसकेका रसिया र उरुग्वेबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । यो खेल समूह विजेताको टुंगो लाग्नेछ । २ खेलमा शत प्रतिशत नतिजा निकाल्दै […]
अर्जेन्टिना, नाइजेरियाविरुद्ध खेल्ने टिम साम्पाओलीले होइन, खेलाडीहरुले तय गर्छन् !
June 24, 2018 Lightadmin0
१० असार, काठमाडौं । विश्वकप यात्रा नै संकटमा पर्ने सम्भावना बढेपछि अर्जेन्टिना टिम तनावमा छ । यो बीचमा प्रशिक्षक जर्ज साम्पाओली बर्खास्तीमा पर्नसक्ने खबरहरु पनि आए । तर, शनिबार खेलाडीहरु र प्रशिक्षकको बैठकले नयाँ समाधान निकालेको छ, त्यो हो नाइजेरियाविरुद्ध खेल्ने टिमको टुंगो लिओनल मेस्सी सहितका खेलाडीहरु नै लगाउने । अर्जेन्टिनाले भोलि नाइजेरियासँग समूह चरणको […]
एसईईको नतिजा सार्वजनिक, कसरी थाहा पाउने नतिजा !
रासस भक्तपुर – २०७४ सालमा भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईईको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय भक्तपुरका अनुसार परीक्षामा ४ लाख ५१ हजार ५ सय ३२ सहभागी भएकोमा २४ हजार २ सय ३४ जनाले ‘ए प्लस’ ग्रेड अर्थात ३ दशमलव ६५ भन्दामाथि ४ सम्म जीपीए ल्याएका छन् । यस्तै ग्रेड ‘ए’ अर्थात जीपीए […]
June 22, 2018 Lightadmin0
८ असार, काठमाडौं । सरकारले गुणस्तरहीन विदेशी वस्तुको आयात रोक्ने तयारी तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । यसो भएमा विदेशमा बिक्नेभन्दा कम मूल्यमा कमजोर गुणस्तरका वस्तु नेपाल ल्याएर बेच्ने क्रम हट्नेछ । स्वदेशी उद्योग तथा उत्पादनलाई सुरक्षण गर्ने योजनाका साथ सेभगार्डस, एन्टि डम्पिङ, तथा काउन्टरभेलिङ ऐनको मस्यौदा तयार भएको हो । वाणिज्य मन्त्रालयले यो ऐनको […]
क्रोएसियाको अर्जेन्टिनामाथी शानदार जीत
विश्वकप फुटबलको बिहीवार राति सम्पन्न खेलमा क्रोएसियाले आर्जेन्टिनालाई स्तब्ध बनाएको छ । बार्सिलोनाका स्टार खेलाडी लिओनेल मेस्सीको टोली ०–३ गोलले पराजित भएको हो । शानदार जितसँगै क्रोएसियाले अन्तिम १६ मा आफ्नो स्थान पक्का गरेको छ । लज्जास्पद हारसँगै अर्को चरणमा प्रवेश गर्ने अर्जेन्टिनाको सम्भावना अब उसको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको छ । अन्तराष्ष्ट्रिय खेलमा आफ्नो पीडा […]
बि.ओ.एचद्वारा रक्तदान कार्यक्रम
June 20, 2018 Lightadmin0
गणेश प्रधान, पोेखरा बि.ओ एचको प्रांगणमा रक्तदान जीवनदान अर्थात रक्तदानले जीवन बचाउँछ भन्ने मुुख्य उद्धेश्यका साथ रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरियो । कार्यक्रमलाई पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय रक्तसंचार कार्यालयले सहजिकरण गरेको थियो कार्यालयका प्रमुुख धुुब्र लामिछानेले रेडक्रस सोसाइटीको तर्फबाट रक्तदानको महत्वको विषयमा बोल्नुुभएको थियो साथै शशी चपाईले रेडक्रसको उत्पत्ति र यसको योगदानको विषयमा बोल्नुुभएको थियो । मन्तव्यको क्रममा […]
जापान विश्वकपमा दक्षिण अमेरिकी टोलीलाई हराउने पहिलो एसियाली देश बन्यो
असार ६, २०७५ विश्वकप २०१८ को समूह एच अन्तरगतको खेलमा कोलम्बियालाई जापानले २–१ ले हराएको छ । यसका साथै विश्वकप इतिहासमा दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रलाई हराउने जापान पहिलो एसियाली देश बनेको छ । विश्वकपका विभिन्न संस्करणमा एसियाली देशहरुको दक्षिण अमेरिकी देशसँग १७ पटक भेट भएको छ । तर यसअघि कुनै पनि एसियाली टिमले दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रलाई […]
इंग्ल्याण्ड, बेल्जियम र स्विडन विजयी
June 19, 2018 June 19, 2018 Lightadmin0
विश्वकप फुटबल अन्तर्गत गएराति भएका खेलमा तीन युरोपेली टोलीहरू– इंग्ल्याण्ड, बेल्जियम र स्विडन–विजयी भएका छन् । इंग्ल्याण्डले ट्युनिसियालाई २–१ ले हराउँदा ह्यारी केनले अन्तिम समयमा गरेको गोल निर्णायक बन्न पुग्यो । इंग्ल्याण्डलाई पहिलो गोल गरेर अग्रता दिलाएका केनले खेल समाप्त हुनुअघि थप गरिएको समयमा चतु¥याइँपूर्वक हेड गरेर आफ्नो टोलीलाई जिताएका थिए । “फल खेलेको” दण्डस्वरूप […]
प्रधानमन्त्री ओली ६ दिने भ्रमणका लागि चीन प्रस्थान
June 19, 2018 Lightadmin0
असार ५, २०७५ काठमाडौं –प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ६ दिने भ्रमणका लागि मंगलबार चीन प्रस्थान गर्नुभएको छ । १ सय १९ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री ओली चीनको राजधानी बेइजिङ प्रस्थान गर्नुभएको हो । उहाँसँग भ्रमण टोलीमा पत्नी राधिका शाक्य, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री […]